Madaxweynaha Ukraine oo hal shardi ku xiray wada-hadalka Ruushka - BANAADIRSOM
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Ukraine oo hal shardi ku xiray wada-hadalka Ruushka
Madaxweynaha Ukraine oo hal shardi ku xiray wada-hadalka Ruushka
Kyiv (Banaadirsom) – Ka dib markii konton qof oo rayid ah ay u suurto gashay in laga saaro magaalada go’doonsan ee Mariupol Jimcihii, ayaa madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, sheegay heshiis dhex mara iyaga iyo Ruushka uu shardi u yahay in marka hore ay ciidamada Ruushku ku noqdaan goobihii ay joogeen intaanay magaaladaa weerarin.
Volodymyr Zelensky oo la hadlayay xarun cilmi-baaris ah oo London ku taalla ayaa sheegay in taasi ay tahay waxa ugu yar ee waddankiisu aqbali karo.
Waxa uu sheegay in uu yahay hogaamiyaha “Ukraine,” balse ma uusan soo hadal qaadin Crimea oo uu Ruushka la wareegay sanadkii 2014-kii.
Ruushka ayaa hadda dagaal adag ugu jira inuu si buuxda ula wareego magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukiraine.
Sidoo kale waxaa weli halkaas ku jira ciidamada Ukraine oo ay weheliyaan qaar ka mid ah dadka rayidka ah ee ku sugan koonfur-bari ee birta weyn ee Azovstal.
Dhanka kale, Saraakiisha Mareykanka ayaa lagu warramayaa in ay xaqiijiyeen in ay xogo sirdoon siiyeen ciidanka Ukraine oo bartilmaameedsaday isla markaana dilay in badan oo ka mid ah jeneraalada Ruushka kuwaas oo ku naf waayey dagaalka Ukraine.
Sheegashooyin ay jariiradda New York Times ka soo xigatay saraakiil dhinaca gaashaandhigga ah oo aan la magacaabin ayaa u muuqata in ay xaqiijinyaan shakiyo la xiriiray in Mareykanka ay bixinayaan xogo sirdoon oo lagu howlgali karo gacanna ka siin kara saraakiisha Ukraine in ay xushaan bartilmaameedyo aad u qaali ah oo Ruush ah.
Previous articleCabdirashiid Duqa oo war lama filaan ah kasoo saaray dib u doorashada Farmaajo
Next articleDhoobo Daareed oo ka digay ‘shirqool’ ay Somaliland u dhigeyso Puntland